Igwetshwe kanzima indoda eyadubula amaphoyisa eNanda | News24
Igwetshwe kanzima indoda eyadubula amaphoyisa eNanda
Durban - Igwetshwe iminyaka engu-33 ibhadle ejele indoda yaseNanda kulandela ukulahlwa amacala amabili okuzama ukubulala, ukutholakala nezibhamu nezinhlamvu okungekho emthethweni.
UMnqobi Shozi, 29, ugwetshwe yiNkantolo yeMantshi yaseNtuzuma ngomhlaka-23 Januwari 2018 ngemuva kokuba imantshi ilalele ukuthi uShozi wawadubula kanjani amaphoyisa ayezama ukumubopha.
"Umsolwa ugwetshwe iminyaka eyishumi icala ngalinye ngamacala amabili okuzama ukubulala, iminyaka eyishumi ngokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni neminyaka emithathu ngokuthokala nezinhlamvu ezingekho emthethweni," kusho isitatimende samaphoyisa.
OLUNYE UDABA:ISITHOMBE: Amaphoyisa acela ukufuniswa lo 'shayasibhamu'
Kubikwa ukuthi ngomhlaka-6 Okthoba 2016 amaphoyisa aseNanda ayeqhuba umsebenzi endaweni ngesikhathi elandela umkhondo ngamadoda amabili ayesolwa ngokubamba inkunzi abantu endaweni yaseCongo, eNanda.
"Amaphoyisa abe esebona amadoda amabili afana nalawo achaziwe, ngesikhathi esezama ukuwabopha, la madoda avele avulela ngenhlamvu ebhekise emaphoyiseni namaphoyisa aziphindiselela, kwalimala uShozi emlenzeni," kuqhuba isitatimende.
Umsolwa wesibili wakwazi ukubaleka kanti namanje usagcwele amathafa.
UShozi watholakala nezibhamu ezimbili ezingekho emthethweni kanye nezinhlamvu zesibhamu.
UShozi wabe eseboshwa wabekwa amacala okuzama ukubulala amaphoyisa, ukutholakala nezibhamu nezinhlamvu okungekho emthethweni.
Ngokwesitatimende samaphoyisa, iBamba likaKhomishana wamaPhoyisa KwaZulu-Natal, uMajor General Bheki Langa, ukwamukele ukugwetshwa kwalo msolwa wathi lokhu kufanele kube yisibonela kulabo abazama ukudubula amaphoyisa uma eqhuba umsebenzi wawo.